झापा ।दशैँमा टीका लगाउने रहर सबैलाई हुन्छ । तर यसपटक कोभिड–१९ को कहरले गर्दा टीका लगाउने कार्य सावधानीपूर्वक गरिएको पाइएको छ ।मेचीनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना उप्रेतीले आफ्नो परिवारमा यसपाली कोरोना महामारीकै कारण टीका नलगाइएको बताइन् । उपप्रमुख उप्रेतीका पति कोरोना सङ्क्रमणका कारण होम आइसोलेसनमा छन् । उनकी ९० वर्षकी आमा घरमा हुनुहुन्छ ।पारिवारिक सल्लाह गरेर टीका नलगाइएको जानकारी दिदै उनले भनिन् , “कोरोना गएपछि अर्को साल लगाउँला भन्ने सोचियो ।” उनको काँकरभिट्टा, विर्तामोड र काठमाडौंमा रहेका दाजुभाई खलक सबैले पारिवारिक निर्णय बमोजिम यसपाली टीका लगाएनन् ।भद्रपुर नगरपालिका वडा नं. १० निवासी असारु राजबंशीले आजै बिहान पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले परिवारका साथ सावधानीपूर्वक टीका लगाए । राजबंशी १२ दिन अघिदेखि कोरोना सङ्क्रमणका कारण होम आइसोलेसनमा बस्दै आउनु भएको थियो । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोभिड १९ बाट सङ्क्रमित स्वास्थ्यकर्मी लेखनाथ खतिवडालाई भेटेर स्वास्थ्यलाभको पहिलो शुभकामना दिए। कोरोनाविरुद्धको लडाईमा अग्रपङतिमा रहेर खटिरहेका मध्ये स्वास्थ्यकर्मीको योगदान प्रशंसनीय रहेको भन्दै प्रवक्ता शर्मा विजया दशमीको पहिलो शुभकामना दिन मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित खतिवडाको निवासमै पुगेका थिए ।खतिवडा काँकडभिट्टा स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख हुन् । उनी एक साता अघि कोरोना पोजेटिभ भएपछि होम आइसोलेसनमा छन् ।रासस
१० कार्तिक २०७७, सोमबार २०:२७
दशैँमा टीका लगाउने रहर सबैलाई हुन्छ । तर यसपटक कोभिड–१९ को कहरले गर्दा टीका लगाउने कार्य सावधानीपूर्वक गरिएको पाइएको छ ।
मेचीनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना उप्रेतीले आफ्नो परिवारमा यसपाली कोरोना महामारीकै कारण टीका नलगाइएको बताइन् । उपप्रमुख उप्रेतीका पति कोरोना सङ्क्रमणका कारण होम आइसोलेसनमा छन् । उनकी ९० वर्षकी आमा घरमा हुनुहुन्छ ।
पारिवारिक सल्लाह गरेर टीका नलगाइएको जानकारी दिदै उनले भनिन् , “कोरोना गएपछि अर्को साल लगाउँला भन्ने सोचियो ।” उनको काँकरभिट्टा, विर्तामोड र काठमाडौंमा रहेका दाजुभाई खलक सबैले पारिवारिक निर्णय बमोजिम यसपाली टीका लगाएनन् ।
भद्रपुर नगरपालिका वडा नं. १० निवासी असारु राजबंशीले आजै बिहान पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले परिवारका साथ सावधानीपूर्वक टीका लगाए । राजबंशी १२ दिन अघिदेखि कोरोना सङ्क्रमणका कारण होम आइसोलेसनमा बस्दै आउनु भएको थियो । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोभिड १९ बाट सङ्क्रमित स्वास्थ्यकर्मी लेखनाथ खतिवडालाई भेटेर स्वास्थ्यलाभको पहिलो शुभकामना दिए। कोरोनाविरुद्धको लडाईमा अग्रपङतिमा रहेर खटिरहेका मध्ये स्वास्थ्यकर्मीको योगदान प्रशंसनीय रहेको भन्दै प्रवक्ता शर्मा विजया दशमीको पहिलो शुभकामना दिन मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित खतिवडाको निवासमै पुगेका थिए ।
खतिवडा काँकडभिट्टा स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख हुन् । उनी एक साता अघि कोरोना पोजेटिभ भएपछि होम आइसोलेसनमा छन् ।रासस
कोरोना कहरमा टीका
Prevविजयादशमीको टीका लगाइयोदेखि हाम्रो टीम नेपालले खुलामञ्चमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदियोसम्म (भिडियो)
कोलकताले पञ्जाबलाई दियो १५० रनको लक्ष्यNext